हिमालमा लामखुट्टे ! « Lokpath
पोखरा । उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा यतिखेर झुल हालेर सुत्नुपर्छ भन्ने सुन्नु पर्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी असर पारेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उष्णता बढ्नाका कारण पनि यही हो । यहाँ समय नहुँदै हिउँ पग्लने र बेमौसम मै फल लाग्ने स्थितिसमेत पैदा भएको छ ।
हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको घरबजोङ गाउँपालिका वडा नं ५ ठिनीका ६५ वर्षीय पल्डिसी थकाली विगतमा लामखुट्टेको नाम समेत नसुनेका यहाँका स्थानीयवासी यतिखेर भने झुल प्रयोग गर्न बाध्य बनेको बताए । पृथ्वीमा वर्षेनी तापमान बढेर हिमाली क्षेत्रको जनजीवन र बालीनालीमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको उनले बताए ।
पानी पर्ने क्रमले हिमाली क्षेत्रमा बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्नाका साथै कृषि प्रणाली पनि प्रभावित भएको छ । गर्मी क्षेत्रमा मात्र फल्ने बन्दा, काउली यतिखेर ठिनीमै फल्ने गरेको थकालीले जानकारी दिए ।
हिउँ पर्न कम हुनाका साथै हिउँ पर्ने ठाउँमा पानी पर्न थालेपछि मुस्ताङ जिल्लाका वस्तीहरू जोखिममा पर्दै गएको थसाङ गाउँपालिका वडा नं ३ लेतेका ६५ वर्षीय नरसिंह शेरचन बताए ।
“जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउले आफ्नो ठाउँ छोडेर विस्तारै उपल्लो भागतिर सर्दै गएको छ” – उनले भने । स्याउको राम्रो उत्पादन हुने लेतेमा १० वर्ष यता स्याउ फल्नै छोडे पछि उत्पादन तथा बिक्री गरी आयआर्जन गर्दैआएका लेतेवासीलाई स्याउको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा विश्वव्यापी रुपमा बढेको जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि देखिने गरेको वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेल बताए । पानी पर्दा एकसाथ ठूलो पर्ने, लामो समयसम्म नपर्ने जस्ता कारण पानीका मुहान सुक्दै जाने, खेतहरू बाँझिने क्रम बढेको छ ।
नेपालमा मात्र दुई हजार तीन सय २३ वटा हिमताल रहेका छन् । यसमध्ये महत्वपूर्ण मानिने हिमनदी र हिमाली क्षेत्रहरूबाट हिउँ पग्लदै जानु यतिखेर गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
अहिले विश्वभर मानिसले पिउने ७० प्रतिशत पानी हिमखण्डबाटै प्राप्त हुने गरेको सन्दर्भमा हिउँ पग्लेर हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुनु सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,भाद्र,८,शुक्रवार ०८:२०
हेर्नुहोस्, महान् दार्शनिक प्लेटोका १८ प्रेरणादायी भनाइ
काठमाडौं । प्लेटोको जन्म एथेन्सको नजिकै ईजिना नामक द्विपमा भएको थियो । उनको परिवार एक सामन्त वर्गको थियो । उनका
सोच परिवर्तनका लागि पढ्नुहोस् गौतम बुद्धका महान भनाइहरु
काठमाडौं । गौतम बुद्ध गौतम गोत्रमा आजभन्दा ५ सय ६३ इसाईपूर्वमा नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका थिए । उनलाई बुद्ध धर्मका प्रणेता
लगातार हाच्छ्युँ किन आउँछ ? यस्तो छ यसको उपचार (भिडियोसहित)
श्वासप्रश्वाससम्बन्धी देखिने एलर्जिक राइनाइटिसको समस्या अहिले बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । वायुमण्डलमा भएका विभिन्न किसिमका प्रदूषणदेखि शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमतामा
भात नखाँदा यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ
तौल घटाउनका लागि धेरै व्यक्तिले आफ्नो खानपानमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । खानपानमा परिवर्तन गरेरै तौल घटाउने लहरमा धेरैले